ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခံရတဲ့ အရုပ်ကျွန်း - Thutazone
ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခံရတဲ့ အရုပ်ကျွန်း
By ThutammPosted on March 17, 2018 November 19, 2018
ရေးသားသူ – Dr.Aung
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထူးဆန်းခြောက်ခြားဖွယ် နေရာတွေ အများကြီး ရှိ နေပါတယ်။ အချို့ နေရာတွေ ဟာ ရောက်သွားတာ နဲ့ ကံဆိုး မိုးမှောင်ကျပြီး မကောင်းတာ တစ်ခုခု ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာ ကို ကြိုသိ နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရရှိ နေတတ် ပါတယ်။ တစ်ချို့ နေရာတွေ ကျတော့ ရောက်သွားတာ နဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အလိုလို ဝမ်းနည်းတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်သလို ။ အချို့ကျတော့လည်း ရောက်ရှိနေတုန်း တစ်ခဏ စိတ်ထဲ ခဲဆွဲ ထားသလို တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ခံစားရပြီး အဲ့ဒီ နေရာက ပြန်လည် ထွက်ခွာပြီး နောက်ပိုင်း လဲ အိပ်မက်ဆိုး တွေနဲ့ ကြောက်လန့် နေရတဲ့ အထိ ခြောက်ခြားဖွယ် နေရာမျိုးတွေ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီး မှာ အမှန်တကယ် တည်ရှိ နေတာပါ။
အထက်ပါ ခံစားချက်တွေ တစ်နေရာတည်း ရောထွေးပြီး ခံစားရစေမယ့် နေရာတစ်ခု မက္ကဆီကို နိုင်ငံ မှာ တွေ့ရှိနိုင် ပါတယ်။ အဲ့ဒီ နေရာ ကတော့ ‘La Isla de las Munecas’ လို့ အမည်တွင် တဲ့ မက္ကဆီကို က အရုပ်ကျွန်း လို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်းငယ်လေး တစ်ခု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Island of the Dolls ( La Isla de las Munecas ) ဟာ Mexico City တောင်ဘက် ပိုင်းမှာ ရှိပြီး လူ လုပ် ကျွန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ရှေးခေတ် အခါတွေ တုန်းက စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး တွေ ထွန်းကားဖို့ အတွက် ဖန်တီးထားတဲ့ ကျွန်းငယ်လေး တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ‘Floating Garden’ ဆိုပြီး အသုံးတော်ခံ ဖူးခဲ့ တာပါ။
Mexico City တောင်ဘက်ပိုင်း မှာ ထို ကဲ့သို့သော လူ လုပ် ကျွန်းငယ်တွေ မြောက်မြားစွာ ရှိခဲ့ဖူးပြီး ယနေ့ခေတ် စက်မှု့လယ်ယာထွန်းကားချိန် မှာတော့ ထို ကျွန်းတွေ ဟာ စွန့်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံခြားသား တွေ လေ့လာရေး ခရီး အတွက် သက်သက်သာ ရပ်တည် နေတော့ တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီကျွန်းလေးတစ်ခုလုံးမှာ ရာပေါင်းများစွာသော အရုပ်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအရုပ်တွေအားလုံးဟာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံတဲ့ အရုပ်တွေချည်းပါပဲ။ ခြေပြတ်လက်ပြတ် အရုပ်တွေ၊ ခေါင်းပြတအရုပ်တွေကို ကျွန်းရဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ ထိုင်ခုံတွေ အနှံ့မှာ ချိတ်ဆွဲလို့ထားပါတယ်။
ထို ကျွန်ငယ်တွေ အများကြီးထဲ မှ ခြောက်ခြားဖွယ် အကောင်းဆုံး သရဲခြောက်တယ်လို့ နာမည် အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ‘La Isla de las Munecas ‘ ဟာ လူသိ အများဆုံး နေရာ တစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ ကျွန်းဟာ ဘာလို့ Island of the Dolls လို့ အမည်တွင်ခဲ့ တာလည်း, ဘယ်လို ခြောက်ခြားဖွယ် အတိတ်တွေ ရှိခဲ့ တာလည်း ဆို ဒီ ဇာတ်လမ်း အစပြုခဲ့ ပုံက ဒီလို ပါ။
၁၉၅၀ ခုနှစ်မှာ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ဖြစ်တဲ့ ဒွန် ဂျူလီယံ ဆန်တာနာ ဆိုသူ ဟာ ခု Island of the Dolls လို့ နာမည်တွင် လာမယ့် စွန့်ပစ်ထားတဲ့ လူ လုပ် ကျွန်းလေး မှာ တဲအိမ် ဆောက်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အစ မှာတော့ သူ့ ရည်ရွယ်ချက် က အသီးအနှံတွေ စိုက်ပျိုးဖို့ ဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း သူပျိုးထောင် ရမှာ က အိမ်မက်ဆိုး တွေ ဆိုတာ ကို ဆိုးရွား လှတဲ့ ကံကြမ္မာ က လွှဲလို့ ဘယ်သူ မှ ကြိုတင် မသိရှိ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။
တစ်နေ့ မှာ Barrera ဟာ မိန်းကလေးငယ် တစ်ယောက် ကျွန်းအစပ် မှာ ရေနစ်နေတာ ကို တွေ့လိုက် ရ ပါတယ်။ သူ ဟာ မိန်းကလေး ကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပေမယ့် မမှီခဲ့ ပါဘူး။ ထို မိန်းကလေး ကို မကယ်ဆယ် နိုင်တဲ့ Barrera ဟာ သူ့ကိုယ်သူ အပြစ် မကင်းဘူး လို့ ခံစားရပြီး စိတ်တွေ ဖိစည်း နေခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလို နဲ့ Barrera ဟာ ကျွန်းပေါ်မှာ မိန်းကလေးငယ်လေး ရဲ့ သီချင်းဆိုသံ, ရယ်မော နေသံ, သူ့ကို လာကယ် ဘို့ ခေါ်ဆောင် နေတဲ့ အသံ တို့ကို စတင်ကြား ရတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် သူမှာ့ တစ်ပါး အခြား ဘယ်သူဘယ်ဝါ မှ ရှိ မနေတဲ့ ကျွန်းပေါ်မှာ ညဘက်ရောက်လျှင် သူ့တဲအိမ် အပြင်ဘက် က ကုတ်ခြစ်သံများ ကြားလာ ရခြင်း ပြတင်းတံခါး လာ ခေါက်ခြင်းတွေ ကိုပါ ခံစား ရလာ တယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ည အချိန် Barrera ကျွန်းပေါ်လှည့်ပတ်သွားချိန် တွေမှာ သူမ ၏ အရိပ် အယောင် ကို သစ်ပင်ထက် သို့ ရေပြင် တို့တွင် မြင်ရခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ် လာပါ တော့ တယ်။ ဒီလို နဲ့ လူသူ ကင်းမဲ့တဲ့ ဒီ ကျွန်းပေါ်မှာ တစ်ကိုယ်တည်း နေတဲ့ Barrera ရဲ့ အပြုအမူ တွေဟာ ကြောင်စီစီ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ရေထဲ မှာ အရုပ်ကလေး တစ်ရုပ် မျောပါလာတာ ကို Barrera တွေ့မြင် လိုက် ပါတယ်။ သူ ဟာ ရေနစ် သေဆုံး သွားတဲ့ မိန်းကလေးငယ် ရဲ့ အတိတ်နမိတ် ပြတယ် လို့ ယူဆပြီး ထို အရုပ် ကို ရေထဲ မှ မရရအောင် ဆယ်ယူခဲ့ ပါတော့ တယ်။
ပြီးနောက် ထို အရုပ်ကို ကျွန်းပေါ်ရှိ သစ်ပင် တစ်ပင် ပေါ် ချိတ်ထားပြီး သေဆုံး သွားတဲ့ မိန်းကလေးငယ် ကျေနပ်အောင် ဆိုပြီး ချိတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ထိုနေ့ က စပြီး Barrera ရဲ့ ခြောက်ခြားမှုတွေ ဟာ အတော်အတန် ပြေလျော့ လာခဲ့ တာကြောင့် သူ ဟာ မိန်းကလေးငယ် ရဲ့ဝိဥာည် ပိုမို ကျေနပ်မှု့ရအောင် အရုပ်တွေ ကို ထပ်မံ ရှာဖွေပြီး ချိတ်ဖို့ ကြိုးစား လာခဲ့ ပါတယ်။
Barrera ဟာ သူ စိုက်ပျိုး ထားတဲ့ အသီးအနှံတွေ ကိုတောင် အရုပ်တွေ နဲ့ အလဲအထပ် လုပ်တဲ့ အထိ ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး အရုပ်တွေ ကို ကျွန်းအနှံ့ ရှိ သစ်ပင် အောက်ခြေများ မှာ ထားရှိခြင်း, သစ်ပင် ပင်စည် နှင့် ကိုယ်ထည်များတွင် ချည်ထားခြင်း, ကျွန်းရှိ ခြံစည်းရိုး များတွင် စိုက်ထားခြင်းများ အပြင် သစ်ပင် ထက် မှ ကြိုးဖြင့် တွဲလောင်း ချိတ်ခြင်း တို့ကို ပါ ပြုလုပ် လာခဲ့ ပါတယ်။ မကြာခဏ လည်း ထို အရုပ်များ ကို စိတ်တိုင်းကျ နေရာများ သို့ ပြန်လည် ရွေ့ပြောင်း ခြင်း တို့ကို ပါ ပြုလုပ်လေ့ ရှိတာပါ။
ဒီလို နဲ့ Barrera အရုပ်တွေ ဟာ ကျွန်း တစ်ခုလုံး အပေါ် ပြန့်နှံ့ များပြား လာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အမူအကျင့် ကို နီးစပ်ရာ ကျွန်း က လူတွေ ကပါ ပြောစဖွယ့် ဖြစ်လာခဲ့ တာပါ။ လူ အချို့က ထို ကျွန်း မှ အရုပ်များ သည် ညဘက် များတွင် သီချင်းဆိုခြင်း, ပြုံးရယ်ခြင်း တို့ ပြုကာ အသက်ဝင် လာကြ သည် ဟု ယုံကြည် နေကြ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျွန်း နှင့် နီးစပ်ရာ လူများ က Barrera သည် ညဘက် များတွင် ထို အရုပ်များ နှင့် စကား ပြောခြင်း နှင့် သီချင်း ဆိုခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် နေသည် ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလို နဲ့ ထို ကျွန်းပေါ် ရှိ အရုပ်များ နှင့် Barrera တို့ အကြောင်းသည် ကျွန်း အနီးတစ်ဝိုက် သို့လော သို့လော ပြောစမှတ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။
Barrera ရဲ့ အရုပ် စုဆောင်း ချိတ်ဆွဲခြင်း အကျင့်ထူး ဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အကြာ မှာ ရပ်တန့် သွားခဲ့ ရ ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Barrera ရဲ့ ရုပ်အလောင်း ကိုလည်း ယခင် Barrera ပြောခဲ့ ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးငယ် ရေနစ် သေဆုံး ခဲ့တဲ့ နေရာ မှာပဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ရတာ ကြောင့် ဖြစ် ပါတယ်။ ဒေသခံတွေ ရဲ့ အဆိုအရ Barrera ရဲ့ ဝိဥာည် ဟာ မိန်းကလေးငယ်လေး ရဲ့ ဝိဥာည် နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ထို ကျွန်းပေါ်မှာ ဆက်လက် ရှိနေတယ် လို့ ယုံကြည် နေကြ ပါတယ်။
ဒွန်သေဆုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ဒီကျွန်းကလေးအကြောင်းကို လူသိများလာပြီး တော့ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေလည်း များလာပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ရုပ်မြင်သံကြား ဋ္ဌာနတွေကပါ လာရောက်ရိုက်ကူးပြီးတော့ အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ဒီ အရုပ်ကျွန်းလေးဟာ တစ်ကယ့် ကို သရဲခြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတောင် ပါပါသတဲ့။ ယနေ့အချိန် အထိ ထို ကျွန်းကြီး ပေါ်မှာ Barrera စုဆာင်း ချိတ်ဆွဲ ခဲ့တဲ့ အရုပ်များ ကို လက်ရာမပျက် ထပ်မံ တွေ့ရှိ နိုင်ပြီး ထို ကျွန်းသို့ အလည်သွား သူတွေ အနေနဲ့လည်း အရုပ်အသစ် တစ်ခုစီ ယူဆောင် ပေးသွားလေ့ ရှိတာပါ။
လက်ရှိ အချိန်တွင် လည်း ကျွန်းလေး ပေါ်သို့ အလွယ်တကူ သွားလာ နိုင်မှု့တို့ကြောင့် သဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်များ အား စိတ်ဝင်စားသူများ, ထိတ်လန့် စွန့်စားမှု့ကို ကြိုက်နှစ် သက်သော ခရီးသည်များ နှင့် ပြည့်နှက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ အလည်လာသူတွေကတော့ သူတို့ဟာ အရုပ်ကလေးတွေရဲ့ တိုးတိုးလေး ညည်းသံကို ကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခရီးသွားများ အဝင်အထွက်ဖြင့် ရှုပ်ထွေး နေသော်လည်း La Isla de las Munecas ကျွန်း မှ Barrera ၏ အရုပ်ကလေးများ မှာမူ သူတို့ အား ချိတ်ဆွဲ ချည်နှောင် ထားသော သစ်ပင်, ခြံစည်းရိုးများ ထက်မှ သေးငယ် ဝိုင်းစက်သော မျက်လုံး အစုံ တို့ဖြင့် ငေးမော ကြည့်ရှု ကျန်နေခဲ့ မည်သာ ဖြစ်ပါ တော့တယ်။
Barrera မကယ်နိုင် လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ဟာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါလဲ ?
Barrera က ဘာ ရည်ရွယ်ချက် တွေနဲ့ ကျွန်း တစ်ခုလုံး ကို အရုပ်တွေ ပြည့်နေ စေခဲ့ တာလဲ ?
Barrera ကိုယ်တိုင် ကကော ဘယ်လို နည်း နဲ့ ရေနစ် သေဆုံး နေရ တာလဲ ? သူ သေဆုံးမှု့ ကလည်း တိုက်ဆိုင်မှု့သက်သက်လား ?
သို့မဟုတ် သေဆုံးသွားတဲ့ မိန်းကလေး ရဲ့ ဝိဥာည် ကို သွားရောက် စောင့်ရှောက်ဖို့ သက်သက်လား ?
ဆိုတာ တွေ ကတော့ Don Julian Santana Barrera မှာ့ လွဲလို့ ဖြေရှင်း မရသေးတဲ့ ပဟေဋ္ဌိ တစ်ခု အနေ နဲ့ ကျန်ရှိ နေဦး မှာ ဖြစ်ပါတယ်…….
ကွောကျစရာအကောငျးဆုံး နရောတဈခုအဖွဈသတျမှတျထားခံရတဲ့ အရုပျကြှနျး (unicode)
ရေးသားသူ – Dr.Aung
ကမ်ဘာပျေါမှာ ထူးဆနျးခွောကျခွားဖှယျ နရောတှေ အမြားကွီး ရှိ နပေါတယျ။ အခြို့ နရောတှေ ဟာ ရောကျသှားတာ နဲ့ ကံဆိုး မိုးမှောငျကပြွီး မကောငျးတာ တဈခုခု ဖွဈတော့မယျ ဆိုတာ ကို ကွိုသိ နတေဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ရရှိ နတေတျ ပါတယျ။ တဈခြို့ နရောတှေ ကတြော့ ရောကျသှားတာ နဲ့ တဈပွိုငျနကျ အလိုလို ဝမျးနညျးတဲ့ စိတျတှေ ဖွဈပျေါနတေတျသလို ။ အခြို့ကတြော့လညျး ရောကျရှိနတေုနျး တဈခဏ စိတျထဲ ခဲဆှဲ ထားသလို တငျးတငျး ကပျြကပျြ ခံစားရပွီး အဲ့ဒီ နရောက ပွနျလညျ ထှကျခှာပွီး နောကျပိုငျး လဲ အိပျမကျဆိုး တှနေဲ့ ကွောကျလနျ့ နရေတဲ့ အထိ ခွောကျခွားဖှယျ နရောမြိုးတှေ ကနြျောတို့ ကမ်ဘာမွကွေီး မှာ အမှနျတကယျ တညျရှိ နတောပါ။
အထကျပါ ခံစားခကျြတှေ တဈနရောတညျး ရောထှေးပွီး ခံစားရစမေယျ့ နရောတဈခု မက်ကဆီကို နိုငျငံ မှာ တှရှေိ့နိုငျ ပါတယျ။ အဲ့ဒီ နရော ကတော့ ‘La Isla de las Munecas’ လို့ အမညျတှငျ တဲ့ မက်ကဆီကို က အရုပျကြှနျး လို့ ချေါတဲ့ ကြှနျးငယျလေး တဈခု ပဲ ဖွဈပါတယျ။Island of the Dolls ( La Isla de las Munecas ) ဟာ Mexico City တောငျဘကျ ပိုငျးမှာ ရှိပွီး လူ လုပျ ကြှနျးတဈခု ဖွဈခဲ့ ပါတယျ။ ရှေးခတျေ အခါတှေ တုနျးက စိုကျပြိုး မှေးမွူရေး တှေ ထှနျးကားဖို့ အတှကျ ဖနျတီးထားတဲ့ ကြှနျးငယျလေး တဈခု ဖွဈပွီး ‘Floating Garden’ ဆိုပွီး အသုံးတျောခံ ဖူးခဲ့ တာပါ။
Mexico City တောငျဘကျပိုငျး မှာ ထို ကဲ့သို့သော လူ လုပျ ကြှနျးငယျတှေ မွောကျမွားစှာ ရှိခဲ့ဖူးပွီး ယနခေ့တျေ စကျမှု့လယျယာထှနျးကားခြိနျ မှာတော့ ထို ကြှနျးတှေ ဟာ စှနျ့ပယျခွငျး ခံခဲ့ရပွီး နိုငျငံခွားသား တှေ လလေ့ာရေး ခရီး အတှကျ သကျသကျသာ ရပျတညျ နတေော့ တာ ဖွဈပါ တယျ။ ဒီကြှနျးလေးတဈခုလုံးမှာ ရာပေါငျးမြားစှာသော အရုပျတှနေဲ့ ပွညျ့နပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီအရုပျတှအေားလုံးဟာ ကိုယျလကျအင်ျဂါမစုံတဲ့ အရုပျတှခေညျြးပါပဲ။ ခွပွေတျလကျပွတျ အရုပျတှေ၊ ခေါငျးပွတအရုပျတှကေို ကြှနျးရဲ့ သဈပငျတှေ၊ ထိုငျခုံတှေ အနှံ့မှာ ခြိတျဆှဲလို့ထားပါတယျ။
ထို ကြှနျငယျတှေ အမြားကွီးထဲ မှ ခွောကျခွားဖှယျ အကောငျးဆုံး သရဲခွောကျတယျလို့ နာမညျ အကွီးဆုံး ဖွဈတဲ့ ‘La Isla de las Munecas ‘ ဟာ လူသိ အမြားဆုံး နရော တဈခု ဖွဈလာ ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ ကြှနျးဟာ ဘာလို့ Island of the Dolls လို့ အမညျတှငျခဲ့ တာလညျး, ဘယျလို ခွောကျခွားဖှယျ အတိတျတှေ ရှိခဲ့ တာလညျး ဆို ဒီ ဇာတျလမျး အစပွုခဲ့ ပုံက ဒီလို ပါ။
၁၉၅၀ ခုနှဈမှာ တဈကိုယျတညျးသမား ဖွဈတဲ့ ဒှနျ ဂြူလီယံ ဆနျတာနာ ဆိုသူ ဟာ ခု Island of the Dolls လို့ နာမညျတှငျ လာမယျ့ စှနျ့ပဈထားတဲ့ လူ လုပျ ကြှနျးလေး မှာ တဲအိမျ ဆောကျပွီး နထေိုငျခဲ့ ပါတယျ။ အစ မှာတော့ သူ့ ရညျရှယျခကျြ က အသီးအနှံတှေ စိုကျပြိုးဖို့ ဖွဈပမေယျ့ နောကျပိုငျး သူပြိုးထောငျ ရမှာ က အိမျမကျဆိုး တှေ ဆိုတာ ကို ဆိုးရှား လှတဲ့ ကံကွမ်မာ က လှဲလို့ ဘယျသူ မှ ကွိုတငျ မသိရှိ နိုငျခဲ့ ပါဘူး။
တဈနမှေ့ာ Barrera ဟာ မိနျးကလေးငယျ တဈယောကျ ကြှနျးအစပျ မှာ ရနေဈနတော ကို တှလေို့ကျ ရ ပါတယျ။ သူ ဟာ မိနျးကလေး ကို ကယျဆယျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ ပမေယျ့ မမှီခဲ့ ပါဘူး။ ထို မိနျးကလေး ကို မကယျဆယျ နိုငျတဲ့ Barrera ဟာ သူ့ကိုယျသူ အပွဈ မကငျးဘူး လို့ ခံစားရပွီး စိတျတှေ ဖိစညျး နခေဲ့ ပါတယျ။ ဒီလို နဲ့ Barrera ဟာ ကြှနျးပျေါမှာ မိနျးကလေးငယျလေး ရဲ့ သီခငျြးဆိုသံ, ရယျမော နသေံ, သူ့ကို လာကယျ ဘို့ ချေါဆောငျ နတေဲ့ အသံ တို့ကို စတငျကွား ရတယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ ပါတယျ။ ဒါ့ အပွငျ သူမှာ့ တဈပါး အခွား ဘယျသူဘယျဝါ မှ ရှိ မနတေဲ့ ကြှနျးပျေါမှာ ညဘကျရောကျလြှငျ သူ့တဲအိမျ အပွငျဘကျ က ကုတျခွဈသံမြား ကွားလာ ရခွငျး ပွတငျးတံခါး လာ ခေါကျခွငျးတှေ ကိုပါ ခံစား ရလာ တယျ။
တဈခါတဈရံ ည အခြိနျ Barrera ကြှနျးပျေါလှညျ့ပတျသှားခြိနျ တှမှော သူမ ၏ အရိပျ အယောငျ ကို သဈပငျထကျ သို့ ရပွေငျ တို့တှငျ မွငျရခွငျးတှေ ဖွဈပျေါ လာပါ တော့ တယျ။ ဒီလို နဲ့ လူသူ ကငျးမဲ့တဲ့ ဒီ ကြှနျးပျေါမှာ တဈကိုယျတညျး နတေဲ့ Barrera ရဲ့ အပွုအမူ တှဟော ကွောငျစီစီ ဖွဈလာ ခဲ့ပါတယျ။ တဈနတေ့ော့ ရထေဲ မှာ အရုပျကလေး တဈရုပျ မြောပါလာတာ ကို Barrera တှမွေ့ငျ လိုကျ ပါတယျ။ သူ ဟာ ရနေဈ သဆေုံး သှားတဲ့ မိနျးကလေးငယျ ရဲ့ အတိတျနမိတျ ပွတယျ လို့ ယူဆပွီး ထို အရုပျ ကို ရထေဲ မှ မရရအောငျ ဆယျယူခဲ့ ပါတော့ တယျ။
ပွီးနောကျ ထို အရုပျကို ကြှနျးပျေါရှိ သဈပငျ တဈပငျ ပျေါ ခြိတျထားပွီး သဆေုံး သှားတဲ့ မိနျးကလေးငယျ ကနြေပျအောငျ ဆိုပွီး ခြိတျပေးခဲ့ ပါတယျ။ ထိုနေ့ က စပွီး Barrera ရဲ့ ခွောကျခွားမှုတှေ ဟာ အတျောအတနျ ပွလြေော့ လာခဲ့ တာကွောငျ့ သူ ဟာ မိနျးကလေးငယျ ရဲ့ဝိဥာညျ ပိုမို ကနြေပျမှု့ရအောငျ အရုပျတှေ ကို ထပျမံ ရှာဖှပွေီး ခြိတျဖို့ ကွိုးစား လာခဲ့ ပါတယျ။
Barrera ဟာ သူ စိုကျပြိုး ထားတဲ့ အသီးအနှံတှေ ကိုတောငျ အရုပျတှေ နဲ့ အလဲအထပျ လုပျတဲ့ အထိ ဖွဈလာ ခဲ့ပွီး အရုပျတှေ ကို ကြှနျးအနှံ့ ရှိ သဈပငျ အောကျခွမြေား မှာ ထားရှိခွငျး, သဈပငျ ပငျစညျ နှငျ့ ကိုယျထညျမြားတှငျ ခညျြထားခွငျး, ကြှနျးရှိ ခွံစညျးရိုး မြားတှငျ စိုကျထားခွငျးမြား အပွငျ သဈပငျ ထကျ မှ ကွိုးဖွငျ့ တှဲလောငျး ခြိတျခွငျး တို့ကို ပါ ပွုလုပျ လာခဲ့ ပါတယျ။ မကွာခဏ လညျး ထို အရုပျမြား ကို စိတျတိုငျးကြ နရောမြား သို့ ပွနျလညျ ရှပွေ့ောငျး ခွငျး တို့ကို ပါ ပွုလုပျလေ့ ရှိတာပါ။
ဒီလို နဲ့ Barrera အရုပျတှေ ဟာ ကြှနျး တဈခုလုံး အပျေါ ပွနျ့နှံ့ မြားပွား လာခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ ထူးခွားတဲ့ အမူအကငျြ့ ကို နီးစပျရာ ကြှနျး က လူတှေ ကပါ ပွောစဖှယျ့ ဖွဈလာခဲ့ တာပါ။ လူ အခြို့က ထို ကြှနျး မှ အရုပျမြား သညျ ညဘကျ မြားတှငျ သီခငျြးဆိုခွငျး, ပွုံးရယျခွငျး တို့ ပွုကာ အသကျဝငျ လာကွ သညျ ဟု ယုံကွညျ နကွေ ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကြှနျး နှငျ့ နီးစပျရာ လူမြား က Barrera သညျ ညဘကျ မြားတှငျ ထို အရုပျမြား နှငျ့ စကား ပွောခွငျး နှငျ့ သီခငျြး ဆိုခွငျး တို့ကို ပွုလုပျ နသေညျ ကို မွငျတှခေဲ့ကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ ပါတယျ။ ဒီလို နဲ့ ထို ကြှနျးပျေါ ရှိ အရုပျမြား နှငျ့ Barrera တို့ အကွောငျးသညျ ကြှနျး အနီးတဈဝိုကျ သို့လော သို့လော ပွောစမှတျ ဖွဈလာခဲ့ ပါတယျ။
Barrera ရဲ့ အရုပျ စုဆောငျး ခြိတျဆှဲခွငျး အကငျြ့ထူး ဟာ နှဈပေါငျး ၅၀ အကွာ မှာ ရပျတနျ့ သှားခဲ့ရ ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ Barrera ရဲ့ ရုပျအလောငျး ကိုလညျး ယခငျ Barrera ပွောခဲ့ ဖူးတဲ့ မိနျးကလေးငယျ ရနေဈ သဆေုံး ခဲ့တဲ့ နရော မှာပဲ ရှာဖှတှေရှေိ့ ခဲ့ရတာ ကွောငျ့ ဖွဈ ပါတယျ။ ဒသေခံတှေ ရဲ့ အဆိုအရ Barrera ရဲ့ ဝိဥာညျ ဟာ မိနျးကလေးငယျလေး ရဲ့ ဝိဥာညျ နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ထို ကြှနျးပျေါမှာ ဆကျလကျ ရှိနတေယျ လို့ ယုံကွညျ နကွေ ပါတယျ။
ဒှနျသဆေုံးပွီးသှားတဲ့နောကျမှာတော့ ဒီကြှနျးကလေးအကွောငျးကို လူသိမြားလာပွီး တော့ လာရောကျလညျပတျသူတှလေညျး မြားလာပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ ရုပျမွငျသံကွား ဋ်ဌာနတှကေပါ လာရောကျရိုကျကူးပွီးတော့ အစီအစဉျတဈခုမှာ ဒီ အရုပျကြှနျးလေးဟာ တဈကယျ့ ကို သရဲခွောကျပါတယျဆိုပွီးတောငျ ပါပါသတဲ့။ ယနအေ့ခြိနျ အထိ ထို ကြှနျးကွီး ပျေါမှာ Barrera စုဆာငျး ခြိတျဆှဲ ခဲ့တဲ့ အရုပျမြား ကို လကျရာမပကျြ ထပျမံ တှရှေိ့ နိုငျပွီး ထို ကြှနျးသို့ အလညျသှား သူတှေ အနနေဲ့လညျး အရုပျအသဈ တဈခုစီ ယူဆောငျ ပေးသှားလေ့ ရှိတာပါ။
လကျရှိ အခြိနျတှငျ လညျး ကြှနျးလေး ပျေါသို့ အလှယျတကူ သှားလာ နိုငျမှု့တို့ကွောငျ့ သဘာဝလှနျ ဖွဈရပျမြား အား စိတျဝငျစားသူမြား, ထိတျလနျ့ စှနျ့စားမှု့ကို ကွိုကျနှဈ သကျသော ခရီးသညျမြား နှငျ့ ပွညျ့နှကျလကျြ ရှိနပေါတယျ။ အလညျလာသူတှကေတော့ သူတို့ဟာ အရုပျကလေးတှရေဲ့ တိုးတိုးလေး ညညျးသံကို ကွားရတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ခရီးသှားမြား အဝငျအထှကျဖွငျ့ ရှုပျထှေး နသေျောလညျး La Isla de las Munecas ကြှနျး မှ Barrera ၏ အရုပျကလေးမြား မှာမူ သူတို့ အား ခြိတျဆှဲ ခညျြနှောငျ ထားသော သဈပငျ, ခွံစညျးရိုးမြား ထကျမှ သေးငယျ ဝိုငျးစကျသော မကျြလုံး အစုံ တို့ဖွငျ့ ငေးမော ကွညျ့ရှု ကနျြနခေဲ့ မညျသာ ဖွဈပါ တော့တယျ။
Barrera မကယျနိုငျ လိုကျတဲ့ မိနျးကလေး ဟာ ဘယျသူ ဘယျဝါလဲ ? Barrera က ဘာ ရညျရှယျခကျြ တှနေဲ့ ကြှနျး တဈခုလုံး ကို အရုပျတှေ ပွညျ့နေ စခေဲ့ တာလဲ ? Barrera ကိုယျတိုငျ ကကော ဘယျလို နညျး နဲ့ ရနေဈ သဆေုံး နရေ တာလဲ ? သူ သဆေုံးမှု့ ကလညျး တိုကျဆိုငျမှု့သကျသကျလား ?
သို့မဟုတျ သဆေုံးသှားတဲ့ မိနျးကလေး ရဲ့ ဝိဥာညျ ကို သှားရောကျ စောငျ့ရှောကျဖို့ သကျသကျလား ? ဆိုတာ တှေ ကတော့ Don Julian Santana Barrera မှာ့ လှဲလို့ ဖွရှေငျး မရသေးတဲ့ ပဟဋ်ေဌိ တဈခု အနေ နဲ့ ကနျြရှိ နဦေး မှာ ဖွဈပါတယျ…….
Posted in Amazing, Places, TravelTagged amazing, places, travel
Previous post ပုဂံခေတ်နှောင်းပိုင်းရဲ့ အဓိက မိဖုရားကြီး (သို့) ဥာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသော မိဖုရားဖွားစော
Next post မြန်မာတစ်ဦးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ကိုရီးယား ၄ ဦးရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့